जय श्रीसन्तोषी माताले सबैको कल्याण गरुन, शुक्रबार १९ माघ/फेब्रुवरी २ को राशिफल
आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल माघ १९ गते शुक्रबार इश्वी सन २०१८ फेब्रुवरी २ तारीख फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वितिया तिथी चन्द्रमा सिंह राशिमा सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु विश्व सिमसार दिवस – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
अध्यन अध्यापनमा रुचि बढ्नेछ । नयाँकार्यको थालनिले आम्दानिको दीर्धकालिन श्रोत तयार पार्नेछ । स्वास्थमा भने सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । बिश्वासिला ब्यक्तिहरुबाट सामान्य धोका हुन सक्नेछ । आर्थिक श्रोत्र सबल रहनेछ ।
भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । सामाजिक कार्यमा सरीक हुने अवसर प्राप्त रहनेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा जटिलकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । ब्यापार ब्यवसायका श्रेत्रमा समय त्यति उत्तम रहेकोछैन ।
यात्राकारक दिन रहनेछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको थालनिको योग रहेकोछ । प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा तपाईको अब्बल स्थान प्राप्त रहनेछ । बलतथा पराक्रममा बृद्धि हुनाले शत्रु कमजोर रहलान ।
चिसोको कारण स्बास्थ सम्बन्धिसमस्याले सताउन सक्नेछ । हराएका धनमाल प्राप्ति योग रहेको छ । बौधिक ब्यक्तित्वहरुको सहयोगले कार्य सम्पादनमा बिशेष फाईदा हुनेछ । भौतिक शुःख साधनको प्रयोमामन प्रशन्न रहनेछ ।
नजिकका मित्र बाट धोका हुन सक्छ । एकान्त प्रिय हुने योग रहेको छ । ब्यापार ब्यवसायमा राम्रो समय रहेको छ । पारीबारिक साथ सहयोग प्राप्त हुनाले कार्य सम्पादनमा सहयोग पुग्नेछ । सामान्य चोट पटकको सम्भाबना रहेको छ ।
धनमालमा सामान्य क्षति हुने योग रहेको छ सजग रहनु होला । शारीरिक आलस्यताले सताउन सक्नेछ लगानि गर्दा बिशेष होस पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ । प्रेम सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाब आउन सक्नेछ ।
प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । अरुको बिश्वास गर्नाले धोका हुन सक्छ । आम्दानि क्षेत्र सबल रहेता पनि स्बास्थमा सामान्य बाधा आईपर्ने छ । आटँ शाहसमा कमि आउनाले कार्य सम्पादनमा झन्झट आउन सक्नेछ ।
सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ । कुल कुटुम्बहरुको साथ सहयोग प्राप्त रहला । कार्य क्षेत्रमा सोचे अनुरुप समय दिन सकिने छैन । सामुहिक कार्यमा सहभागी हुने अबसर रहेकोछ । बोल्दा होश पुर्याउनु होला ।